တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးဆိုရှယ်မီဒီယာ profile များကို - Gaddr မှာ Francisco က Andreasson CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူအင်တာဗျူး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
အဆိုပါ Gaddr app ကိုရယူပါ:
တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးဆိုရှယ်မီဒီယာ profile များကို
Gaddr မှာ Francisco ကအန်တိုနီယို Andreasson CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူအင်တာဗျူး
Francisco ကအန်တိုနီယို Andreasson သူ၏ဆွီဒင်, နေ 23 နှစ်အရွယ်နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါသည် app ကို GADDR ယခုအရှိန်အဟုန်နှင့်လူကြိုက်များစုဆောင်းနေပါတယ်။ သူ2နှစ်အရွယ်မှာ Francisco ကကိုလံဘီယာကနေမွေးစားခဲ့ပါတယ်, သူ 13 ၏အသက်အရွယ်မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီစတင်ခဲ့သည်။ လမ်းဆင်းဆယ်နှစ်သူတစ်ဦးအလားအလာငယ်ရွယ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကုမ္ပဏီ GADDR ထဲမှာလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည် စတော့ဟုမ်းအတွက်လက်နက် Accelerator အစီအစဉ်ကိုယင်းက start-up, full-စုံတဲ့ကုမ္ပဏီမှကနဦးအဆင့်အနေဖြင့်ကြီးထွားကူညီပေးနေ။ ထို program ၏တန်ဖိုးနည်းပြနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏တန်ဖိုးရှိသောကွန်ယက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် access ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါမှာ Francisco ကဖြည့်ဆည်း SUP46 - နည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက် Co-အလုပ်လုပ်အာကာသနှင့်စတော့ဟုမ်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ-ups စတင်ရန်။ GADDR - ကျနော်တို့ကကော်ဖီနဲ့ကျွန်မ Francisco ကရဲ့နောက်ခံနှင့်သူ၏ start-up အကြောင်းကိုငါ့အလိုရှိသမျှမီးလောင်ရာမေးခွန်းများမေးရာစကားပြောခန်း, အဘို့ဆင်းထိုင်။
Ekaterina Larsson ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
Francisco ကအန်တိုနီယို Andreasson:
စိတ်အားထက်သန်မှု။ ကျွန်မရှေ့မှာအခုလုပ်နေတာငါအရာအားလုံးကိုပြုသောအမှုများနှင့်အနာဂတျမှာလုပ်ချင်ပြီအရာအားလုံးငါ့အကိလေသာကိုဗဟိုပြု။ ငါပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ့မောင်းနှင်မှုအင်အားသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါငါ့ကိုလှည့်ပတ်အခြားလူများအဘို့အအေးမြမှုအရာကိုဖန်တီးရန်အိုင်တီအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်အခါထဲကနေသိခဲ့ရတယ်။ နှင့်အထွေထွေအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းလွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ငါနည်းပညာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြနှင့်အလွတ်တန်းနှင့်ငါ့စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ခရီး၌ငါ၏လမ်းညွှန်လိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
© Francisco ကအန်တိုနီယို Andreasson
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးကုမ္ပဏီစတင်တဲ့အခါသင် 13 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ကောင်းပြီ, ငါ 10 နှစ်အရွယ်မှာ coding နှင့်ဒီဇိုင်းစတင်ခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့ဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြေခံ video player ကို - ငါကွန်ပျူတာများအတွက်အချို့သောအသေးစား app များကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါငါသည်ငါ့အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီများမှကိုကူညီနိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းကနောက်မှငါကုမ္ပဏီများ '' ကြော်ငြာကြည့်ရှုရန်သတင်းစာများကိုကြည့်ရှု။ အဖြစ်မကြာမီငါမကောင်းတဲ့တဦးတည်းမြင်သည်အတိုင်း, ငါကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုချရေးသားခဲ့သည်သူတို့ကို googled သူတို့ကိုခေါ်ဆိုမှုကိုပေး၏။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ထိုအတူပြုကြ၏ - ထိုညံ့ဖျင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူမြားကိုထွက် scouted ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းဗားရှင်းစေနိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီများကပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုတစ်ဦး 13 နှစ်အရွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရန်အဘို့အဟုတ်ပါတယ်, ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကထဲကအချို့စီမံကိန်းများကိုတယ်။ ငါကျောင်းကမှာအလွန်လူကြိုက်များဆိမဟုတ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံအားဖြင့်ငါထကြီးထွားလာသမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အကွန်ပျူတာငါ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်နိုင်တဲ့ coding နှင့်အတူန်းကျင် fiddling ။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါသညျဤလောကကိုပြောင်းလဲချင်ခဲ့တယ်။ ငါစတိဗ်ဂျော့ဘ်နှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ပါ။ ထိုအခါငါတကယ်သူတို့ကိုမျှော်ကြည့်ပေမယ့်မရသူတို့အေးမြနဲ့တင်ပါးသောကြောင့်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတော့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ဤမျှလောက်ယဇျပူဇျောသောကွောငျ့, ငါနေဆဲကအေးမြ Elon Musk (PayPal နှင့် Tesla ကားများတီထွင်သူ) ကဲ့သို့သောလူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ဘယ်မှာရဖို့သိပ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကွောငျးတှေ့! ကြောင်းအထင်ကြီးမဟုတ်သောအရာတွေအများကြီး, စွန့်ခြင်းမရှိဘဲအလွန်အောင်မြင်သောနေသောကမ္ဘာပေါ်မှာလူအတော်များများရှိပါတယ်။
သင်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲချင်ဟုပြောသည့်အခါဒါ - အဘယ်သို့သောလမ်းအတွက်သင်ကပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုသလဲ
အိုင်တီနှင့်အထွေထွေအတွင်း Tech မှစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်ပြဿနာကိုကြည့်ကနည်းပညာမှတဆင့် solvable ဖြစ်ပါတယ်သည်ဟုမထင်မခဲယဉ်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျနော်တို့လူသားများ, ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေအတွက်ဖြုန်းနှစ်နှင့်ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏တကား! အားလုံးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မတစ်ဦးကို Artificial Intelligence အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို ကျနော်တို့အဆောက်အဦးထဲမှာနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်းခဲ့လျှင် AI အ, ကငါးမိနစ်အတွင်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်တကား! ရုံကစဉ်းစား! ဥပမာအားဖြင့်, ကြှနျုပျတို့သညျဤ DNA ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဖြစ်ပါသည်, ဤငါတို့ကဒီနှင့်ရောဂါဖြေရှင်းကူညီပေးရန်စုံလင် nanobot ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင်းကိုငါသိ၏။ AI အများနှင့် VR - ဒီတော့ဒီငါရေရှည်၌ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုချင်အရာဖြစ်တယ်။ ငါကအကြောင်းသိပ်မပြောလေ့ပေမယ့်ယခုကြှနျုပျတို့အကြောင်းပြောဆိုသမျှသောသူတို့အားအေးမြမှုအရာတို့ကို, 50 နှစ်များတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောဖြစ်ကြောင်းကို! အဖြစ်မှန်၏ပြီးပြည့်စုံကို virtual ခြင်း simulation ရှိခြင်းလိုပဲ။ ကျနော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းယခုကြှနျုပျတို့ရှိသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှချွတ်စွပ်အရွယ်အစားကြောင်း, ယခုအခါအပြိုင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုတစ် matrix ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကြသည်! ငါကယုံကြည်ကြဘူး။
သငျသညျယခု 23 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုယခု 13 နှင့်များ၏အသက်အရွယ်မှာသင့်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီအကြားဖွစျခဲ့သလဲ
ငါ၏အအစောပိုင်းအတိုင်ပင်ခံကာလအတွင်းကျွန်မအမှုအရာတွေအများကြီးကိုပြု၏။ ငါကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုကိုအတူမသာအလုပ်လုပ်ခဲ့, နှင့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအပေါ်စီမံကိန်းများသို့ပွေးလေ၏။ ထိုနောက်ငါဂိုတက္ကသိုလ်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်နှင့်အရောင်းနှင့်စနစ်များသိပ္ပံအတွက်ဒီဂရီကိုယူ။ ထိုအခါငါစတော့ဟုမ်းအတွက်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်မတက္ကသိုလ် GADDR ပတ်သက်. စိတ်ကူးရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါထွက်ကျဆင်းသွားအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ GADDR အတူတက်လာခဲ့တာလဲ
ပထမဦးစွာငါရှင်းပြနိုင်ပါတယ် GADDR တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာ profile များကိုထားခွင့်ပြုမယ့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါကဒါသိသာထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ကူးအတူတက်ရောက်လေ၏။ သငျသညျသစ်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းအခါတိုင်း, ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပါတီမှာ၏ပြဿနာကအမြဲရှိပါတယ်: "ဘယ်မှာငါသည်သင်တို့ကို add သင့်သလဲ အဘယ်သို့နည်း, LinkedIn တို့သို့မဟုတ် Instagram ကိုပေါ်တွင်သင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ် "ပြီးတော့သင်ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှာဖွေနေစတင်ကဤမျှလောက်အချိန်ယူ! ဒါကြောင့်ငါကဤကဲ့သို့သောမဖြစ်သင့်စဉ်းစားမိတယ်။ သင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေဤမျှလောက်အချိန်မဖြုန်းသင့်တယ်!
ဟုတ်ပါတယ်, စစ်မှန်တဲ့ပေမယ့်တွေ့မိချင်ဒါကြောင့်များစွာသောလူရှိပါတယ်။ YouTube ကိုသို့မဟုတ်ဗိုအပေါ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်သန်းကြွယ်သူဌေးနေသောဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့တို့နှင့်ကြီးသောနောက်လိုက်အများကြီးရှိချင်တယ်။ ကျနော်တို့လျှင်မြန်စွာအွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစဉ်အဆက်ထက် ပို. အရေးကြီးသည်ဘယ်မှာခေတ်မှလာမယ့်ကြသည်! နှင့်အင်တာနက်အလွန်ငယ်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချည်းနှီးဖြစ်၏သော 25 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရှေ့ကိုအနာဂတ်နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာကိုကြည့်ပါလျှင်ဒီတော့လူတွေကသူတို့တောင်မှအသီးအသီးအခြားအွန်လိုင်းမတွေ့သည့်အခါအချိန်ကိုမှတ်မိနေမည်မဟုတ်! အဘယ်အရာကိုအင်တာနက်ယခုအင်တာနက် 50 နှစ်များတွင်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအနေဖြင့်လုံးဝမမှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီတော့ GADDR ငါ့ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ငါ့အလိုရှိသမျှဆိုရှယ်မီဒီယာ profile များကိုထားကူညီပေးမလဲ FB, Instagram ကို, LinkedIn နှင့် Twitter - ငါရှိသမြှသောလေးလူမှုရေးပလက်ဖောင်းငါ့ GADDR ပရိုဖိုင်းကနေ post နိုင်သလား?
သင်ထွက်ပေးနိုငျသောပရိုဖိုင်းကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ခု universal ပရိုဖိုင်းကိုရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုအရပ်မှအားလုံးလေးယောက်ပို့စ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့၏ GADDR ပရိုဖိုင်းရှိတစ်ချိန်ကဒါပေမယ့်ငါသင့်အခြားလေးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းအများပြည်သူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်၏ပရိုဖိုင်တွင်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်အခု app ကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝလည်ပတ်ဗားရှင်းရှိပါသလား
ကျနော်တို့အခုအပြည့်အဝလည်ပတ်ဗားရှင်းပေမယ့်စက်တင်ဘာလ၏အစအဦး၌အကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်သောဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိမည်! ကျနော်တို့ကအပေါ်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်ကအခုထွက်သည်အဘယ်အရာကနေကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဗားရှင်းအသစ်နှင့် ပတ်သက်. အရာရာမပြောနိုင်ပေမယ့် GADDR ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးပိုရှိရလိမ့်မည်။ သငျသညျပိုပြီးမကြာခဏ GADDR app ကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအကအများကြီးပိုကြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် app ကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်စျေးကွက်မရှိဘဲအတော်ကြာထောင်ပေါင်းများစွာအော်ဂဲနစ်အသုံးပြုသူများကတယ်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်။ ငါ့အဘို့, လက်ျာ, ယခုနံပါတ်များသော်လည်းအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာတက်လက်မှတ်ထိုးသူကိုမြင်ရဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏ website တွင်တစ်ဦး GADDR link ကိုရှိပါတယ်ခဲ့သူနိုင်ငံတကာဂီတအနုပညာရှင်အဖြစ်ကြီးမားတဲ့ဆွီဒင်ဘဏ်များ၏လူမှုမီဒီယာမန်နေဂျာတက်လက်မှတ်ထိုးဥပမာ MAX ဟမ်ဘာဂါ (ကကြီးမားသောဆွီဒင်ဟမ်ဘာဂါကွင်းဆက်) ရှိသည်။ ထိုသည်ငါတို့အဘို့အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ!
ကျနော်တို့ကအရမ်းဖော်ရွေ Traction နေကြသည် - ငါတို့သည်နိုင်ပါတယ်သောကြောင့်, ငါတို့သည်အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာရချင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ (အသုံးပြုသူတိုးတက်မှုနှုန်း) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်အနည်းငယ်က start-ups ရှိပါတယ်။ လူတွေကသူတို့ပိုမိုလွယ်ကူတှေ့ရှိချင် GADDR အသုံးပြုသောအခါသူတို့က, မိမိကိုယ်ကိုမြှင့်တင်အပြန်အလှန်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူပိုပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုချင်တယ်။ ထိုအခါကပိုသူတို့ GADDR ပရိုဖိုင်းကိုသုံးပြီးအပြန်အလှန်, ပိုကလူ GADDR အတွက်တန်ဖိုးမြင်လျက် join ချင်တယ်။
အေးမြသောအသံ။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ GADDR တစ်ပူးတွဲတည်ထောင်သူရှိသည်, သင်အကြောင်းကိုပိုမိုငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
ဟုတ်ပါတယ်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အားဖြင့် app ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအများအပြားလလောက်, ပြီးတော့ငါကတိုးတက်လာအောင်ကူညီမယ့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူရှာနေတော့တာပဲ။ ငါပြုစုသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်၏, ငါကပိုပါရမီ developer များရှိခြင်းသော့ချက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကနဲ့ကျွန်တော်အတူတူတကယ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်! ငါပိုကောင်းတဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူတွေ့ပြီနိုင်ဘူး! အဖြစ်မကြာမီသူ concept ကိုနားလည်သဘောပေါက်အဖြစ်သူကယ့်ကိုအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ သူလည်း GADDR အပေါ်အချိန်ပြည့်အာရုံစူးစိုက်မှယခုသူ၏တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ GADDR အကြောင်းကိုစကားပြောလူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားသည်နှင့်ဒါလိမ္မာပါးနပ်ထင်! ဘယ်ကိုအပေါ်ကိုပင်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့လှုံ့ဆျော!
သငျသညျငါလွန်စွာသင်ကူညီပေးခဲ့သည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည့်လက်နက် Accelerator ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိသည်နှင့်သင်မည်သို့အလားအလာသူတွေကိုစကားပြောဘူးပါသလား
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကုမ္ပဏီသို့ပိုပြီးပိုက်ဆံအတွက်ချပြီးကျနော်တို့ကိုတောင်ပိုပြီးပိုက်ဆံကဒီဆောင်းဦးရာသီပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ယခုကျွန်တော်ပိုပြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲကြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အကျိုးတူအရင်းရှင်ထက်ပိုကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိသည်။ ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစကားပြောသည့်အခါကိုယ်ကကျနော်တို့ဖြေရှင်းရေးနှင့်မျှမတဦးတည်းဒါဝေးကဖြေရှင်းနိုင်မှစီမံခန့်ခွဲမူကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြောင်းပြောကြသည်။ ငါတို့သည်ဆွီဒင်အတွက်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်အသင်းတွေထဲကတစ်ခုများမှာ! ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျွန်တော်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာဖြေရှင်းရေးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအရပ်၌များစွာသောအေးမြအသည်းအသန် apps များထွက်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအတော်များများမဟုတ်အမှန်တကယ်တကမ္ဘာလုံးစကေးဖို့အလားအလာရှိသည်။
သငျသညျ GADDR ကိုချစ်မယ်လို့လူတစ်ဦးထွက်ထောက်ပြနိုင်ပါလျှင်, ထိုသူအဖြစ်ပါ့မလား
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဘလော့ဂါနှင့်အများသောသူတို့သည်နောက်လိုက်ရှိသည်ဖို့လိုလားတဲ့သူတစ်ဦးက 19 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။
ကိုလံဘီယာအတွက် Francisco က 1994
သငျသညျ2နှစ်ရှိသောအခါသင်ကကိုလံဘီယာကနေမွေးစားခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုမတယောလမ်း၌သင်တို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သလဲ
ဟုတ်ကဲ့, ကရှိပါတယ်။ ငါထကြီးထွားလာတဲ့အခါကျွန်မရဲ့ဆွီဒင်မိဘများမှငါ့ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သိရှိခဲ့၏။ ကျွန်မသင်ယူသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုငါပေးဖို့ဤမျှလောက်ပြီအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုနားလည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အကြှနျုပျ၏ဇီဝမိခင်လမ်းမများပေါ်တွင်နေထိုင် Cartagena အတွက် 14 နှစ်အရွယ်ပြည်တန်ဆာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုခဲ့ပေမယ့်ငါ့ကိုဂရုစိုက်နိုင်ဘူး, ဒါကြောင့်သူမအချို့မိသားစုနှင့်အတူငါ့ကိုထားခဲ့တယ်။ ဥပမာအားမူးယစ်ဆေးဝါးများတွေအများကြီးနဲ့သူတို့သညျငါ့ကိုလျစ်လျူရှု - သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်ရွားလှမိသားစုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာငါနီးပါးအာဟာရချို့တဲ့သေဆုံးနှင့်ဆေးရုံတက်ရာတစ်ဦးပွိုင့်သို့ရောက်ကြ၏။ ထိုအခါငါ၏အဆွီဒင်မိသားစုသညျ လာ. အကြှနျုပျကိုချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ ဒါကြောင့်ငါကအကြီးမိသားစုနှင့်အတူဆွီဒင်အတွက်မြို့ဆင်ခြေဖုံးအထိကြီးထွားရန်ဤအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းတယ်ကိုယ့်ဝန်းကျင်ထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်နေ့ရက်ကို The Simpsons မကြည့်နိုငျပါသညျ! ငါ့ကိုငါဘဝ၌ဤအခွင့်အလမ်းကိုအသုံးဖို့ရှိသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောတစ်ခုခုလုပ်, ဒီမှာမဖွစျနိုငျကွောငျးကိုသဘောပေါက်! ငါကိုလံဘီယာအတွက်တည်းခိုခဲ့လျှင်, ငါဖြစ်ကောင်းယခု Dead or မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပင်ရုံပေါ့လျော့သူဖြစ်သည်ငါ့ဆီသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မရှိသေးပေ! ဒါဟာငါမောင်းထုတ်ခံစတင်ခဲ့အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးအပိုတွန်းအားပေးသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါထူးခြားသောတစ်ခုခုလုပ်နေသူဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရချင်တယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အပေါ်ဖိအားတွေအများကြီးထားတော်မူ၏။ ငါအလုံအလောက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့တူတခါတရံခံစားရ၏။ ငါအမှုအရာတွေအများကြီးလုပ်နေငါနှင့်ငါအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအရာအားလုံးသို့အချိန်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုထားတော်မူ၏။ သော်လည်း
အလွန်ကြီးစွာသောက start-up, စိတ်ကူးရှိသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်မှာအတားအဆီး start သို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းဖို့မသိရပါဘူးသူတွေကိုအဘို့သင့်အကွံဉာဏျကဘာလဲ?
ဒါဟာသင်ကထင်တယ်ထက်အများကြီးပိုလွယ်ပါ! အမှန်တကယ်, စိတ်ကူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်နေတာလွယ်ကူသည်, ထိုဆက်ခံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခဲယဉ်းသည်။ လူတိုင်းအောင်မြင်စေလိုသည်။ အဆိုပါဇွဲခက်လွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလုပ်နေတာလွယ်ကူပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်အဘို့အကြှနျုပျ၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအလုအယက်အတွက်အမြဲဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါအမှုအရာသည် သာ. နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်သူတို့ဖြစ်ကြသည်ထက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါကလည်းလိုပဲ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အပေါ်ဖိအားတွေအများကြီးထားကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံအဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အဖွဲ့ထားရှိခြင်းသည်တစ်ဦးနှစျသိမျ့ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အပခုံးကိုချွတ်အချို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြာပါသည်။ ဒါငါ့အကိုအခြားအကွံဉာဏျဖြစ်ပါသည်: ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အပေါ်လွယ်ကူသောဖြစ်လိမ့်မည်။
Francisco ကအန်တိုနီယို Andreasson အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
GADDR အပေါ် Francisco က
LinkedIn အပေါ် Francisco က
Luiza Grigorova - မင်းသမီး, မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ
app ကို, Gaddr, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, လူမှုမီဒီယာ, startup, ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ | | rating:5/ 30